Ku saabsan - Nantong Global Packaging Products Co., Ltd.
Laga soo bilaabo 2000, Nantong Global Packaging Products Co., Ltd. waa mid ka mid ah soo saarayaasha ugu waaweyn ee isku qurxinta iyo baakadaha dawooyinka ee ku yaal Haimen Nantong, Gobolka Jiangsu, Shiinaha. Waxaan bixinaa noocyo kala duwan oo alaabooyin muraayad ah oo heer sare ah oo lagu qurxiyo si macaamiisha loogu suurtogeliyo inay lashaqeeyaan xirmooyinkooda.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay waxaa ka mid ah dhalooyinka quraaradaha cadarka leh, dhalooyinka cijiyaha cireedka, qotomiska aluminium oksaydhka ah, dhalooyinka saliida lagama maarmaanka ah, dhalooyinka dhalada ah ee tubbada, koofiyadaha balaastigga ah, koofiyadaha aluminiumka, bambooyin, dhalooyinka caagga ah iyo dhalooyinka noocyada kala duwan ee cuntada & sharaabka.
Waxaan leenahay 5 foornooyin iyo 15 khadadka wax soo saarka, soo saar maalinle ah in ka badan 1.5 milyan oo gogo '. Waxaan abuuri karnaa xirmadaada shaqsiyeed, oo ay kujiraan awoodaha caaryada ee gaarka loo leeyahay, oo soo bandhigaya tas-hiilaadka ugufiican ee loo heli karo baaritaanka xariirta, qalinka ama shaabad kulul oo dahab ah, ku buufinta midabka, aashitada aashitada, warqad dhejis ah, kuleyl wareejin, ECT. Waxaan kuu soo bandhigeynaa habab cusub oo kala duwan oo aad kula kulanto baakadahaaga iyo bixinta caqabadaha leh naqshado habeysan. Kooxdayada naqshadeynta waxay xirfad u leeyihiin inay weydiiyaan su'aalaha saxda ah iyo inay soo bandhigaan xalalka ugu fiican ee loogu baahan yahay naqshadeyntaada baakadka shaqsiyeed oo leh qiime tartan ah. Waxaan qabannaa mabda'a ah "tayada ugu horreysa" si aan u qancino shuruudaha badan ee macaamiisha. Nidaamka hubinta tayada Strick ayaa la bixin karaa. Erey ahaan, waxaan u bixinnaa adeeg hal-joogsi ah macaamiisha.
Waxaan kaqeyb galnaa carwooyin qurux badan oo kaladuwan sanadkasta, sida Beautyworld oo Dubai ah, Cosmoprof Las Vegas, Intercharm Beauty Fair in Russia, Cosmoprof Asia in HK, Vietnam Beauty in Vietnam iyo wixii la mid ah. Bandhigyadan, waxaan kula kulannaa tiro badan oo saaxiibo cusub ah, macaamiil fara badanna ha noo sii sheegaan.
Anagoo ah mid kamid ah kuwa ugu waaweyn ee keena baakadaha leh xirfadlayaal khibrad uleh arimahan dalka Shiinaha, waxaan horeyba alaabadayada ugu dhoofineynaa in kabadan 50 wadan oo adduunka ah, sida Pakistan, Russia, Poland, Argentina, Vietnam, Malaysia, USA, UK, Greece, Switzerland ... Khibrad dheer oo arimahan ku saabsan iyo heerka tayada sare leh ayaa shirkadeena u horseeday sumcad caan adduunka ah.
Bandhigga Quruxda Adduunka Dubai
Bandhigga Quruxda Aasiya Baasifiga
Bandhigga Quruxda ee Las Vegas
HBA Showga Quruxda
Intercharm Showga Quruxda Ruushka
Quruxda & Nadiifinta Iiraan